Fly Basic Economy: Bzụ ahịa maka ụlọ mposi na ụgbọ elu?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Fly Basic Economy: Bzụ ahịa maka ụlọ mposi na ụgbọ elu?
Inweta njem nleta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • LGBTQ • News • Technology • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Chọ ụgbọ elu dị ala na ọdụ ụgbọ elu kacha mma na ịchọta ụgbọ elu akụ na ụba na ụgbọ elu ndị America, United, Delta na ụgbọ elu ndị ọzọ nwere otu uru doro anya: Uru ahụ bụ ọnụahịa ahụ, ka ị na-aghọgbu onwe gị? Linesgbọ elu ụgbọ elu chọrọ ime njem gị dị ka nhụsianya dị ka o kwere mee, yabụ na ị gaghị emehie ihe a ọzọ. Okwu ego na ụlọ ọrụ ụgbọ elu.
N’ezie, nhọrọ ego eji eme njem na-enye ndị ahịa ụgbọ elu ụfọdụ ike ịzụta ihe na ụdị la carte-kwụọ ụgwọ naanị maka ihe ị chọrọ, ma ọ bụrụ oche ebunyegoro gị ma ọ bụ ịnweta mpempe akwụkwọ mpịachi, akpa, ọtụtụ kilomita, ọnọdụ ma ọ bụ dị mfe dịka ịchọta ụzọ iji zụọ ahịa nke iji lavatory ụgbọ elu. eTN kọrọ banyere American Airlines na-arịọ onye njem ka ọ mamịrị na akpa.
N’afọ 2017, e boro onye njem nọ na Ryan Air $ 100 ka ọ ghara iji ebe a na-adọba mmiri. A Gbọ elu Ryanair si Leeds gaa Faro, Portugal, enweghị lavatories niile ya arụ ọrụ. Ọ ghaghị ịgba mmamịrị, ya mere o jiri karama, a ga-akwụkwa ya nha maka ime nke a.
Na Europe, ịkwụ ụgwọ maka mposi na ebe ọha, ụlọ nri ma ọ bụ ebe ndị njem nleta bụ ihe nkịtị. Ekwesịrị ịgụnye lavatories ụgbọelu na nhazi ego?
N'ebe ụfọdụ na United States, ọ bụ iwu na-akwadoghị ịkwụ ụgwọ ụlọ mposi, mana ụgbọ elu dị n'okpuru Federal ma ọ bụ ikike mba ọzọ. Lelee ihe ndị njem nleta ga-achọta mgbe ha na-aga mposi na Europe, ma jiri nke a tụnyere ihe ọ ga-ahụ iji ụlọ mposi n'akụkụ osimiri dị ka Florida ma ọ bụ Hawaii.
Somefọdụ ụgbọ elu na-anabata iji karama kama ịsa ahụ ụlọ ịwụ, gụnyere United Airlines: “Anyị anaghịzi akpọ ndị uwe ojii na ndị ahịa ma ọ gwụla ma nchekwa ọ dị n'ihe ize ndụ.” Ryanair emeghị nkwa ndị dị otú ahụ. Ha kpọrọ ndị uwe ojii ka ha zute ụgbọ elu ahụ, na onye njem ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ na-eji karama ahụ akwụ 90 Pound.
Ndị ụgbọ elu na-adabere na usoro ọgbụgba na klaasị iji nweta ego na ugwu.
Nke a bụ azịza ga - ekwe omume:
Ndị njem klas mbụ na-akwụ ụgwọ zuru oke ma ghara ịga njem na nwelite, ha na-enweta nnabata na ohere naanị ịbanye na ime ụlọ ịsa ahụ dị ọcha na klas mbụ, gụnyere ude mmiri.
Ndị otu adịchaghị na ndị njem na njem njem akụ na ụba mgbe niile nwere ohere ịnweta otu ime ụlọ ịwụ - ụlọ ịsa ahụ akụ na ụba - mana anaghị etinye ude mmiri na akwa nhicha akwụkwọ.
Ndị njem njem akụ na ụba na-enweta usoro ịntanetị iji jiri lavatory. Dị ohere a ga - eme ka onye ọ bụla njem ma ọ bụrụ na enwere akara ma nwee ike ịbata nku nku na klaasị mbụ ma ọ bụ ụlọ akụ na ụba.
Ndị njem nwere ike iji laptọọpụ ha ma ọ bụ mbadamba ha abanye na sistemụ na kaadị akwụmụgwọ. Ọnụ kachasị elu ga-echekwa ihe mbụ.
Ndị njem na-enweghị kaadị akwụmụgwọ ga-azụrịrị kaadị visa a kwụrụ ụgwọ tupu ha abanye na ụgbọ elu ahụ ebe ọ bụ na ụgbọ elu ugbu a bụ mpaghara enweghị ego.
Onye ọ bụla ọzọ ga-achọ iji karama ma kwụọ ụgwọ mgbe ọ rutere.
Nke a ga - agba ndị njem ume ịkwụ ụgwọ n'ezie maka oche nke izizi kama ịdabere na nwelite nkwalite. Ọ ga - eweta ego maka ndị ụgbọ elu, wepu ahịrị, ma lekwaa ọdụ ụgbọ elu dị iche iche na - achọsi ike ịkwado. Onye ọ bụla na-emebi iwu dị otú ahụ kwesịrị ịhazi atụmatụ ijide ya mgbe ha rutere.
Na Russia, ihe E jidere onye isi ụgbọelu maka mmamịrị na Putin nsu na Sochi, dị ka a kọrọ na eTurboNews.